Smart App Banner ဖြင့်သင်၏ iTunes Podcast ကိုမြှင့်တင်ပါ Martech Zone
သင်၏ Smart App Banner ဖြင့်သင်၏ iTunes Podcast ကိုမြှင့်တင်ပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 13, 2020 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 13, 2020 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ဝေမှုကိုအချိန်ကာလများစွာကြာအောင်ဖတ်ပြီးပါကကျွန်ုပ်သည် Apple ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ကိုသင်သိသည်။ ငါကဒီမှာထုတ်ဖော်ပြသသွားတာလိုရိုးရှင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ၊ ငါ့ကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်စေတယ်။
iOS တွင် Safari တွင်သင် site တစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏မိုဘိုင်း application ကိုမကြာခဏမြှင့်တင်ကြသည်ကိုသင်သတိပြုမိပေလိမ့်မည် စမတ် App ကို Banner။ နဖူးစည်းစာတန်းပေါ်တွင် နှိပ်၍ သင်သည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့တိုက်ရိုက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီးမွေးစားခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
သင်သတိမပြုမိသောအချက်မှာ Smart App Banner ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည် သင်၏ podcast ကိုမြှင့်တင်ပါ! ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Podcast တခုကိုအတွက်ငါတို့ link ကိုဖြစ်ပါသည်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ URL မှဂဏန်းအမှတ်အသားကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ရှိ head tag များကြားတွင်အောက်ပါ meta tag ထည့်နိုင်သည်။
iOS Safari visitors ည့်သည်များသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြင့် ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောနဖူးစည်းစာတန်းကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သူတို့ကဒီကိုနှိပ်ရင်သူတို့ဟာ Podcast ဆီကိုတိုက်ရိုက်ယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။
ငါတကယ် Android လိုအလားတူချဉ်းကပ်မှုချမှတ်ရန်အလိုရှိ၏!
Tags: app banner ကိုသုံးသည်ပန်းသီးitunesစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Podcastpodcast အလံSafari ဥယျာဉ်ကိုလည်းစမတ်အက်ပလီကေးရှင်းမင်္ဂလာပါ
Showpad: အရောင်းအ ၀ ယ်အကြောင်းအရာ၊ သင်တန်း၊ ၀ ယ်သူနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း
PDF File ကို Adobe နဲ့ဘယ်လိုချုံ့မလဲ